बालुवाटार पुगेर एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? (भिडिओ) – Nepal Press
बालुवाटार पुगेर एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? (भिडिओ)
२०७८ माघ १ गते १०:५४
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले बालुवाटार पुगेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शनिबार एमाले नेताहरु सुवास नेम्वाङ, योगेश भट्टराईलगायतले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवासमै गएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टबाट नागरिक आतंकित भइरहेका बेला सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै उल्लेख्य पहल नगरेको एमालेको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुअघि एमाले सचिव योगश भट्टराईले भने– कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदम प्रभावकारी भएनन्, भण्डारणमा भएका खोप पनि नागरिकले लगाउन पाएका छैनन्, यसले स्थितिलाई झन् जोखिमपूर्ण बनाउँछ ।
तीनै तहका सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चुस्त राख्न आग्रह गर्दै नेता भट्टराईले आवश्यक परे एमालेले सहयोग गर्ने बताए । ‘नागरिकको स्वस्थ्यप्रति एमाले सधैं जिम्मेवार छ, कोरोना नियन्त्रणका लागि हामीले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्छौं, उनले भने ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासबाट अहिलेको सरकारले सिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हुन् ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने– सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छ । खोपका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।
प्रकाशित: २०७८ माघ १ गते १०:५४
झापाको बिर्तामोडमा गठबन्धन पराजित, एमालेकी पवित्रा महतरा बनिन् मेयर
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा एमाले विजयी